Onuadɔ a Yɛbɛda no Adi Sɛ Nokware Kristofo Asafo | Bɛn Yehowa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
‘Monkɔ so Nnantew Ɔdɔ Mu’
1-3. Sɛ yesuasua Yehowa nhwɛso wɔ ɔdɔ a ɔda no adi mu a, dɛn na efi mu ba?
‘ANIGYE wɔ ɔma mu sen ogye.’ (Asomafo no Nnwuma 20:35) Yesu nsɛm no si nokwasɛm titiriw yi so dua: Mfaso wɔ ɔdɔ a pɛsɛmenkominya nnim so. Ɛwom sɛ anigye kɛse wɔ ɔdɔ a yenya mu de, nanso anigye kɛse koraa wɔ nea yɛde ma anaa yɛda no adi kyerɛ afoforo mu.
2 Obiara nni hɔ a onim eyi yiye sen yɛn soro Agya no. Sɛnea yehui wɔ ɔfã yi ti ahorow a edi kan mu no, Yehowa na ɔyɛ ɔdɔ ho nhwɛso a ɛsen biara. Obiara nni hɔ a wada ɔdɔ adi wɔ akwan akɛse so anaa bere tenten sen ɔno. Ɛnde, so ɛyɛ nwonwa sɛ wɔfrɛ Yehowa “anigye Nyankopɔn”?—1 Timoteo 1:11, NW.
3 Yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ dɔ no pɛ sɛ yɛbɔ mmɔden yɛ sɛ ɔno, titiriw ɛdefa ɔdɔ a yɛbɛda no adi ho. Efesofo 5:1, 2 ka kyerɛ yɛn sɛ: “Munsua Onyankopɔn sɛ mma adɔfo, na monnantew ɔdɔ mu.” Sɛ yesuasua Yehowa nhwɛso wɔ ɔdɔ a ɔda no adi mu a, yenya adekyɛ mu anigye kɛse. Yenya abotɔyam nso a yenim sɛ yɛreyɛ nea ɛsɔ Yehowa ani, efisɛ N’asɛm hyɛ yɛn nkuran sɛ ‘yɛnnodɔ yɛn ho.’ (Romafo 13:8) Nanso, nneɛma foforo wɔ hɔ a enti ɛsɛ sɛ ‘yɛkɔ so nantew ɔdɔ mu.’
Nea Enti a Ɔdɔ Ho Hia
4, 5. Dɛn nti na ɛho hia sɛ yefi ɔdɔ mu da ahofama adi kyerɛ mfɛfo gyidifo?
4 Dɛn nti na ɛho hia sɛ yɛda ɔdɔ adi kyerɛ yɛn mfɛfo gyidifo? Ne tiaatwa mu no, ɔdɔ yɛ su titiriw a ɛwɔ nokware Kristosom mu. Sɛ yenni ɔdɔ a, yentumi ne yɛn mfɛfo Kristofo nnya abusuabɔ a emu yɛ den, na nea ɛho hia titiriw no, yɛnsɛ hwee wɔ Yehowa ani so. Susuw sɛnea Onyankopɔn Asɛm si saa nokwasɛm yi so dua no ho hwɛ.
5 Wɔ Yesu asase so asetra mu anadwo a etwa to no, ɔka kyerɛɛ n’akyidifo no sɛ: “Ahyɛde foforo na mema mo, sɛ monnodɔ mo ho sɛnea medɔɔ mo no, sɛ mo nso monnodɔ mo ho mo ho! Sɛ mododɔ mo ho a, nnipa nyinaa behu sɛ moyɛ m’asuafo.” (Yohane 13:34, 35) “Sɛnea medɔɔ mo no”—yiw, wahyɛ yɛn sɛ yɛnna ɔdɔ a Yesu daa no adi no bi adi. Yehui wɔ Ti 29 no mu sɛ, Yesu yɛɛ nhwɛso a ɛkyɛn so wɔ ɔdɔ mu a ofi daa ahofama adi no mu, na ɔde afoforo ahiade ne nea wɔpɛ dii ne de anim. Ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛda ɔdɔ a pɛsɛmenkominya nnim adi, na ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa pefee ma wɔn a wɔwɔ Kristofo asafo no akyi no hu yɛn dɔ. Nokwarem no, onuadɔ mu a yebefi ada ahofama adi ne ade a ɛsɛ sɛ wɔde hu yɛn sɛ Kristo akyidifo anokwafo.
6, 7. (a) Yɛyɛ dɛn hu sɛ Yehowa Asɛm si ɔdɔ a yɛbɛda no adi so dua kɛse? (b) Ɔdɔ bɛn na Paulo nsɛm a wɔyɛɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ 1 Korintofo 13:4-8 no si so dua?
6 Na sɛ yenni dɔ ɛ? Ɔsomafo Paulo kae sɛ: “Sɛ . . . minni dɔ a, na mete sɛ ayowa a egyigye anaa dɔn a ɛwosow.” (1 Korintofo 13:1) Ɛdɔn a wɔbɔ nnyigyei ano yɛ den. Na ayowa nnyigyei nso ɛ? Nkyerɛase foforo ka sɛ “dawuru a ano yɛ den” anaa “dawuru a egyigye denneennen.” Mfatoho a ɛfata bɛn ara ni! Obi a onni dɔ te sɛ adwinnade a wɔde bɔ nnwom a ɛyɛ dede kekaw asom a ɛpam afoforo sen sɛ wɔbɛbɛn ho akotie. Ɛbɛyɛ dɛn na obi a ɔte saa atumi ne afoforo anya abusuabɔ a emu yɛ den? Paulo kae nso sɛ: “Na mewɔ gyidi nyinaa ma mitutu mmepɔw, na minni dɔ a, memfra.” (1 Korintofo 13:2) Wo de susuw ho hwɛ, obi a onni dɔ yɛ “onipa hunu sen biara,” ɛmfa ho ne nnwuma a ebia ɔyɛ! (The Amplified Bible) So ɛnyɛ nea emu da hɔ sɛ Yehowa Asɛm si ɔdɔ a yɛbɛda no adi so dua kɛse?
7 Nanso, ɔkwan bɛn so na yebetumi ada saa su yi adi wɔ yɛne afoforo nsɛnnii mu? Ma yɛnhwehwɛ Paulo nsɛm a ɛwɔ 1 Korintofo 13:4-8 no mu mfa mmua saa asɛm no. Wonsi ɔdɔ a Onyankopɔn wɔ ma yɛn anaa ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn no so dua wɔ saa nkyekyɛm yi mu. Mmom no, Paulo twee adwene sii sɛnea ɛsɛ sɛ yɛdodɔ yɛn ho yɛn ho no so. Ɔkaa nneɛma bi a ɛkyerɛ ɔdɔ ne nneɛma bi a ɛnkyerɛ ɔdɔ ho asɛm.
Nea Ɔdɔ Kyerɛ
8. Ɔkwan bɛn so na abodwokyɛre betumi aboa yɛn wɔ yɛne afoforo nsɛnnii mu?
8 “Ɔdɔ wɔ abodwokyɛre.” Sɛ yɛwɔ abodwokyɛre a, ɛkyerɛ sɛ yɛne afoforo di wɔ boasetɔ mu. (Kolosefo 3:13) So yenhia boasetɔ a ɛte saa? Esiane sɛ yɛyɛ abɔde a yɛnyɛ pɛ na yɛabom resom nti, ɛyɛ ade a ebetumi aba sɛ bere ne bere mu no, yɛn nuanom Kristofo betumi ahyɛ yɛn abufuw, na yɛn nso yebetumi ayɛ wɔn saa ara. Nanso boasetɔ ne abotare betumi aboa yɛn ma yɛatumi agyina woatĩ me ne woaka me nketenkete a ɛba yɛne afoforo nsɛnnii mu no ano—bere a yɛnsɛe asafo no asomdwoe.
9. Akwan bɛn so na yebetumi ada ayamye adi akyerɛ afoforo?
9 ‘Ɔdɔ yam ye.’ Yɛnam nneyɛe a mfaso wɔ so ne nsɛm a ɛkyerɛ sɛ yedwen afoforo ho so na ɛda ayamye adi. Ɔdɔ ka yɛn ma yɛhwehwɛ akwan a yɛbɛfa so ada ayamye adi akyerɛ, ne titiriw no wɔn a ade ahia wɔn paa no. Sɛ nhwɛso no, ebia na gyidini bi a ne mfe akɔ anim ayɛ ankonam, na ohia nsrahwɛ a ɛbɛhyɛ no nkuran. Ebia na ɛna a oni kunu anaa onuawa bi a ɔte ofie a emufo nni ɔsom biako mu no hia mmoa bi. Ebetumi aba sɛ obi a ɔyare anaa ɔwɔ amanehunu bi mu behia nsɛm a ɛma abotɔyam afi adamfo pa bi hɔ. (Mmebusɛm 12:25; 17:17) Sɛ yedi kan da ayamye adi wɔ akwan a ɛte saa so a, yɛda nokware dɔ adi.—2 Korintofo 8:8.
10. Ɔkwan bɛn so na ɔdɔ boa yɛn ma yegyina nokware akyi na yɛka ho asɛm, bere a saa a yɛbɛyɛ no yɛ den mpo no?
10 ‘Ɔdɔ ne nokware ani gye.’ Nkyerɛase foforo ka sɛ: ‘Ɔdɔ bata nokware ho anigye so.’ Ɔdɔ ka yɛn ma yegyina nokware akyi na ‘yɛkeka nokwasɛm kyerɛkyerɛ yɛn ho.’ (Sakaria 8:16) Sɛ nhwɛso no, sɛ yɛn dɔfo bi yɛ bɔne a anibere wom a, ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa—ne nea wayɛ bɔne—no bɛboa yɛn ma yɛakura Onyankopɔn gyinapɛn ahorow mu sen sɛ yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛkata so, ayiyi ano ama no, anaasɛ yɛadi atoro mpo wɔ nnebɔne no ho. Nokwarem no, ebetumi ayɛ den sɛ wubegye nokware a ɛwɔ asɛm no mu atom. Nanso, esiane sɛ yedwen yɛn dɔfo no yiyedi ho nti, yɛbɛpɛ sɛ ogye Onyankopɔn nteɛso a ɔdɔ wom no na ɔyɛ ho ade. (Mmebusɛm 3:11, 12) Sɛ́ Kristofo a yɛwɔ ɔdɔ no, yɛpɛ sɛ “yɛbɔ yɛn bra yiye ade nyinaa mu” nso.—Hebrifo 13:18.
11. Esiane sɛ ɔdɔ ‘tie ade nyinaa nti,’ dɛn na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden yɛ wɔ mfɛfo gyidifo sintɔ ahorow ho?
11 ‘Ɔdɔ tie ade nyinaa.’ Nea saa asɛm no kyerɛ ankasa ne “ɛkata ade nyinaa so.” (Kingdom Interlinear) Petro Nhoma a edi kan 4:8 ka sɛ: “Ɔdɔ kata bɔne pii so.” Yiw, Kristoni a ɔdɔ kyerɛ no kwan mpere ne ho nkeka ne nuanom Kristofo sintɔ ahorow ho nsɛm nkyerɛ afoforo. Mpɛn pii na mfɛfo gyidifo mfomso ahorow no yɛ nketenkete a yebetumi afi ɔdɔ mu akata so.—Mmebusɛm 10:12; 17:9.
Ɔdɔ ka yɛn ma yenya yɛn nuanom mu ahotoso
12. Ɔkwan bɛn so na ɔsomafo Paulo daa no adi sɛ ogye di sɛ Filemon bɛyɛ ade pa, na dɛn na yebetumi asua afi Paulo nhwɛso no mu?
12 ‘Ɔdɔ gye ade nyinaa di.’ Moffatt nkyerɛase no ka sɛ ɔdɔ “ani gye sɛ ebegye ade pa adi bere nyinaa.” Yennya yɛn mfɛfo gyidifo ho adwene a ɛnteɛ wɔ ɔkwan a ɛmfata so, na yɛn adwenem nyɛ yɛn nãã wɔ ade biara a wɔyɛ ho. Ɔdɔ boa yɛn ‘ma yegye di’ sɛ yɛn nuanom bɛyɛ ‘ade pa,’ na yenya wɔn mu ahotoso. * Hyɛ nhwɛso bi a ɛwɔ krataa a Paulo de kɔmaa Filemon mu no nsow. Ná Paulo rekyerɛw Filemon ahyɛ no nkuran sɛ omfi ayamye mu nnye akoa Onesimo a na waguan a na wabɛyɛ Kristoni no fɛw so. Sɛ́ anka Paulo bɛhyɛ Filemon no, ofi ɔdɔ mu srɛɛ no. Ofii ahotoso mu daa no adi sɛ Filemon bɛyɛ nea ɛteɛ, kae sɛ: “Mewɔ wo setie ho anidaso nti na mekyerɛw wo nhoma, na minim sɛ wobɛyɛ asen nea maka yi po.” (Nkyekyɛm 21) Sɛ ɔdɔ ka yɛn ma yenya yɛn nuanom mu ahotoso saa a, yɛma wotumi yɛ ade pa.
13. Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ yɛhwɛ kwan sɛ yɛn nuanom bɛyɛ ade pa?
13 ‘Ɔdɔ nya ade nyinaa mu anidaso.’ Bere a ɔdɔ wɔ ahotoso no, ɛsan wɔ anidaso nso. Ɔdɔ ka yɛn ma yɛhwɛ kwan sɛ yɛn nuanom bɛyɛ ade pa. Sɛ nhwɛso no, sɛ onua bi ‘yɛ mfomso’ a, yɛhwɛ kwan sɛ obegye mmɔden a wofi ɔdɔ mu bɔ sɛ wɔbɛteɛ ne so no atom. (Galatifo 6:1) Yɛwɔ anidaso nso sɛ wɔn a wɔyɛ mmerɛw wɔ gyidi mu no bɛyɛ den. Yenya saafo no ho boasetɔ, yɛ nea yebetumi biara de boa wɔn ma wɔbɛyɛ den gyidi mu. (Romafo 15:1; 1 Tesalonikafo 5:14) Sɛ obi a yɛdɔ no fom kwan mpo a, yɛmpa abaw, na yɛhwɛ kwan sɛ da bi bɛba a n’ani bɛba ne ho so na wasan aba Yehowa nkyɛn sɛ ɔba hohwini a ne ho asɛm wɔ Yesu mfatoho no mu no.—Luka 15:17, 18.
14. Akwan bɛn so na wobetumi asɔ yɛn boasetɔ ahwɛ wɔ asafo no mu, na ɔkwan bɛn so na ɔdɔ bɛboa yɛn ma yɛayɛ yɛn ade?
14 ‘Ɔdɔ tɔ ne bo ase ade nyinaa mu.’ Boasetɔ ma yetumi gyina abasamtu ne ahokyere mu pintinn. Ɛnyɛ wɔn a wonni asafo no mu nko na wɔsɔ yɛn boasetɔ hwɛ. Ɛtɔ mmere bi a, asafo no mufo binom tumi sɔ yɛn hwɛ. Esiane sintɔ nti, ɛtɔ bere bi a yɛn nuanom betumi abu yɛn abam. Asɛm bi a wonsusuw ho a wɔka betumi ahaw yɛn yiye. (Mmebusɛm 12:18) Ebia wonni asafo no mu biribi ho dwuma sɛnea yesusuw sɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ no. Onua bi a yebu no nneyɛe betumi ahaw yɛn ma yɛanya adwene sɛ, ‘Kristoni paa na woreyɛ sɛɛ yi?’ Sɛ yehyia tebea horow a ɛte saa a, so yebefi asafo no mu na yɛagyae Yehowa som? Sɛ yɛwɔ ɔdɔ ankasa a, yɛrenyɛ saa! Yiw, ɔdɔ mma yemmu yɛn ani ngu nneɛma pa a onua a wayɛ mfomso no yɛ anaa nneɛma pa a ɛwɔ asafo no mu so koraa esiane onua no mfomso ahorow nti. Ɔdɔ ma yɛkɔ so di Onyankopɔn nokware, na yɛboa asafo no ɛmfa ho nea ebia onipa foforo a ɔnyɛ pɛ bɛyɛ anaa ɔbɛka no.—Dwom 119:165.
Nea Ɔdɔ Nkyerɛ
15. Dɛn ne ahoɔyaw, na ɔkwan bɛn so na ɔdɔ boa yɛn ma yɛkwati nkate a ɛsɛe ade yi?
15 “Ɔdɔ nyɛ ahoɔyaw.” Ahoɔyaw betumi ama yɛn ani abere nneɛma a afoforo wɔ—wɔn agyapade, hokwan ahorow a wɔanya, anaa ɔdom akyɛde a wɔwɔ. Ahoɔyaw a ɛte saa yɛ pɛsɛmenkominya, ɛyɛ nkate a ɛsɛe ade a sɛ wɔanni so a ebetumi asɛe asafo no asomdwoe. Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛako atia ‘ninkuntwe honhom no’? (Yakobo 4:5) Ɛyɛ asɛmfua biako, ɔdɔ. Suban a ɛsom bo yi betumi aboa yɛn ma yɛne wɔn a ɛte sɛ nea wɔanya asetram nneɛma bi a yenni bi no ani agye. (Romafo 12:15) Sɛ wɔkamfo obi wɔ ɔdom akyɛde soronko bi a ɔwɔ anaa biribi titiriw bi a wayɛ ho a, ɔdɔ boa yɛn ma ɛnhaw yɛn.
16. Sɛ yɛdɔ yɛn nuanom ampa a, dɛn nti na yɛremfa nneɛma a yɛreyɛ wɔ Yehowa som adwuma mu no nhoahoa yɛn ho?
16 ‘Ɔdɔ nyɛ ahoahoa, ɛnhoran.’ Ɔdɔ mma yɛmfa yɛn dom akyɛde anaa nneɛma a yetumi yɛ nhoahoa yɛn ho. Sɛ yɛdɔ yɛn nuanom ampa a, ɛbɛyɛ dɛn na yebetumi de nneɛma a yɛayɛ wɔ ɔsom adwuma no mu anaa hokwan ahorow a yɛwɔ wɔ asafo no mu ahoahoa yɛn ho bere nyinaa? Ahohoahoa a ɛte saa betumi abu afoforo abam, na ama wɔate nka sɛ wɔnsɛ hwee. Ɔdɔ mma yɛmfa nneɛma a Onyankopɔn ama yɛyɛ wɔ ne som adwuma mu no nhoahoa yɛn ho. (1 Korintofo 3:5-9) Afei nso, ɔdɔ ‘nhoran’ anaasɛ sɛnea The New Testament in Modern English ka no, ɔdɔ “nnyina nsusuwii hunu so mma ne ho so.” Ɔdɔ mma yɛmma yɛn ho so.—Romafo 12:3.
17. Ɔkwan bɛn so na ɔdɔ ka yɛn ma yesusuw afoforo ho, na nneyɛe bɛn na ɛbɛma yɛakwati?
17 ‘Ɔdɔ nyɛ ne ho sɛnea ɛmfata.’ Obi a ɔyɛ ne ho sɛnea ɛmfata yɛ ade wɔ ɔkwan a enye anaa ɛhyɛ abufuw so. Ɔkwan a ɛte saa nkyerɛ ɔdɔ, efisɛ ensusuw afoforo nkate ne wɔn yiyedi ho koraa. Nanso, ayamye ne nidi wɔ ɔdɔ a ɛka yɛn ma yesusuw afoforo ho no mu. Ɔdɔ hyɛ suban pa, nneyɛe pa, ne obu a yenya ma yɛn mfɛfo gyidifo no ho nkuran. Enti, ɔdɔ remma yɛmfa yɛn ho nhyɛ “aniwude”—nokwarem no, nneyɛe biara a ɛbɛma yɛn nuanom Kristofo ho adwiriw wɔn anaa ahaw wɔn mu.—Efesofo 5:3, 4.
18. Dɛn nti na obi a ɔwɔ dɔ nhwehwɛ sɛ wɔyɛ biribiara sɛnea ɔpɛ?
18 ‘Ɔdɔ nhwehwɛ nea ɛyɛ n’ankasa de.’ Revised Standard Version ka wɔ ha sɛ: “Ɔdɔ nhwehwɛ sɛ wɔyɛ nea ɔpɛ.” Obi a ɔwɔ dɔ nhwehwɛ sɛ wɔyɛ biribiara sɛnea ɔpɛ, te sɛ nea gyama ne nsusuwii teɛ bere nyinaa. Ɔnkyerɛ nea ɛsɛ sɛ afoforo yɛ, na ɔmfa ne tumi nhyɛ wɔn a wɔne no nyɛ adwene no so. Mpiyɛ a ɛte saa da ahantan adi, na Bible ka sɛ: “Ahantan di ɔsɛe anim.” (Mmebusɛm 16:18) Sɛ yɛdɔ yɛn nuanom ampa a, yɛbɛkyerɛ obu ama wɔn nsusuwii, na sɛ ɛbɛyɛ yiye a, yɛafi yɛn pɛ mu agyae nsɛm mu. Nsɛm mu a yegyae ne Paulo nsɛm yi hyia: “Obiara nnhwehwɛ nea ɛyɛ n’ankasa de, na mmom ɔnhwehwɛ nea ɛyɛ ne yɔnko de.”—1 Korintofo 10:24.
19. Sɛ afoforo hyɛ yɛn abufuw a, ɔkwan bɛn so na ɔdɔ boa yɛn ma yɛyɛ yɛn ade?
19 ‘Ɔdɔ bo nhaw no, ɛmfa bɔne nhyɛ ne yam.’ Nea afoforo ka anaa wɔyɛ mma ɔdɔ bo nhaw no ntɛmntɛm. Nokwarem no, ɛnyɛ nwonwa sɛ yɛn bo befuw bere a afoforo haw yɛn. Nanso, sɛ ɛfata sɛ yɛn bo fuw a, ɔdɔ mma abufuw no nkɔ so ntra yɛn mu. (Efesofo 4:26, 27) Yɛremfa nsɛm anaa nneyɛe a ɛyɛ yaw nhyɛ yɛn mu, te sɛ nea yɛakyerɛw agu nhoma mu, na yɛn werɛ mfi. Mmom no, ɔdɔ ka yɛn ma yesuasua yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ dɔ no. Sɛnea yehui wɔ Ti 26 no, Yehowa de firi bere a ɛfata sɛ ɔyɛ saa no. Sɛ ɔde firi a, ne werɛ fi, kyerɛ sɛ, ɔmfa saa bɔne no nni dwuma ntia yɛn akyiri yi. So ɛnyɛ yɛn anisɔ sɛ Yehowa mfa bɔne nhyɛ ne yam?
20. Sɛ yɛn yɔnko gyidini bi yɛ bɔne na ohu amane a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade dɛn?
20 ‘Ɔdɔ ani nnye nea ɛnteɛ ho.’ The New English Bible kan wɔ ha sɛ: “Ɔdɔ nni nnipa nneyɛe bɔne ho ahurusi.” Moffatt nkyerɛase no ka sɛ: “Ɔdɔ ani nnye bere a afoforo yɛ bɔne no.” Ɔdɔ ani nnye nea ɛnteɛ ho, enti yemmu ɔbrasɛe biara adewa. Sɛ yɛn yɔnko gyidini bi yɛ bɔne na ohu amane a, yɛyɛ yɛn ade dɛn? Ɔdɔ remma yenni ahurusi, te sɛ nea yɛreka sɛ, ‘Ɔtwea! Ɛfata no!’ (Mmebusɛm 17:5) Nanso, yɛn ani gye bere a onua bi a wayɛ bɔne fa ɔkwan pa so sɛ ɔbɛsɔre afi ne honhom fam asehwe no mu no.
‘Ade a Eye Kyɛn So’
21-23. (a) Dɛn na na Paulo kyerɛ bere a ɔkae sɛ “ɔdɔ to ntwa da” no? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ ti a etwa to no mu?
21 “Ɔdɔ to ntwa da.” Bere a Paulo kaa saa nsɛm no, na ɔkyerɛ dɛn? Sɛnea yehu wɔ asɛm no mu no, na ɔreka tete Kristofo no honhom akyɛde horow ho asɛm. Saa akyɛde ahorow no yɛɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛe sɛ na Onyankopɔn dom wɔ asafo foforo a wɔahyehyɛ no so. Nanso na ɛnyɛ Kristofo no nyinaa na wotumi sa yare, hyɛ nkɔm, ka kasa foforo. Ná ɛnyɛ ɛno ne ade a ɛho hia; awiei koraa no, na akyɛde ahorow a wɔde yɛ anwonwade no begyae. Nanso, na biribi foforo wɔ hɔ a ɛbɛtra hɔ, biribi a Kristoni biara betumi anya bi. Na ɛyɛ soronko koraa, na ɛbɛtra hɔ akyɛ asen akyɛde a wɔde yɛ anwonwade biara. Nokwarem no, Paulo frɛɛ no ‘ade a eye kyɛn so.’ (1 Korintofo 12:31) Na dɛn ne ‘ade a eye kyɛn so’ yi? Na ɛyɛ ɔdɔ.
Ade a wɔde hu Yehowa nkurɔfo ne ɔdɔ a wɔdodɔ wɔn ho
22 Nokwarem no, Kristofo dɔ a Paulo kaa ho asɛm no “to ntwa da,” kyerɛ sɛ, ɛremma awiei da. Ɛde besi nnɛ no, ahofama a efi onuadɔ mu na ɛma wohu Yesu akyidifo anokwafo. So yenhu ɔdɔ a ɛte saa wɔ Yehowa asomfo a wɔwɔ wiase nyinaa asafo no mu? Saa ɔdɔ no bɛtra hɔ daa, efisɛ Yehowa de daa nkwa ahyɛ n’asomfo anokwafo bɔ. (Dwom 37:9-11, 29) Ɛmmra sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ nea yebetumi biara na ‘yɛakɔ so anantew ɔdɔ mu.’ Sɛ yɛyɛ saa a, yebetumi anya ɔma mu anigye kɛse no bi. Nea ɛsen saa no, yɛbɛkɔ so atra ase—yiw, akɔ so ada ɔdɔ adi—akosi daa, de asuasua Yehowa, yɛn Nyankopɔn a ɔwɔ dɔ no.
23 Wɔ ti yi a ɛde ɔfã a ɛka ɔdɔ ho asɛm reba awiei no, yɛasusuw ɔkwan a yebetumi afa so ada ɔdɔ adi akyerɛ yɛn ho yɛn ho no ho. Nanso, esiane sɛ yenya Yehowa dɔ—ne tumi, n’atɛntrenee, ne ne nyansa—so mfaso wɔ akwan pii so nti, ɛbɛyɛ papa sɛ yebisa sɛ, ‘Mɛyɛ dɛn ama Yehowa ahu sɛ medɔ no ankasa?’ Yebesusuw saa asɛmmisa no ho wɔ ti a etwa to no mu.
^ nky. 12 Nokwarem no, Kristofo dɔ nyɛ nea egye biribiara di. Bible tu yɛn fo sɛ: “Monkari wɔn a wɔde mpaapaemu ba na wɔto hintidua . . . no, na montwe mo ho mfi wɔn mu.”—Romafo 16:17.
2 Korintofo 6:11-13 Sɛ́ ‘yɛbɛtrɛw’ yɛn dɔ mu no kyerɛ dɛn, na yɛbɛyɛ dɛn atumi de afotu yi adi dwuma?
1 Petro 1:22 Ɔkwan bɛn so na nsɛm yi da no adi sɛ ɛsɛ sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma yɛn mfɛfo gyidifo no fi komam, ɛyɛ nokware, na emu yɛ hyew?
1 Yohane 3:16-18 Ɔkwan bɛn so na yebetumi ada no adi sɛ “Onyankopɔn dɔ” te yɛn mu?
1 Yohane 4:7-11 Dɛn na ɛkanyan yɛn kɛse ma yɛda ɔdɔ adi kyerɛ yɛn mfɛfo gyidifo?